ကွန်ပြူတာ ဂျာနယ် | Weenyinthit Bookshelf
၂၀၀၈ နဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ရဲ့ ကွန်ပြူတာဂျာနယ်လေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ထုတ်စာအုပ်လေးတွေကိုတော့ google document ကပါဖတ်ရှူလို့ရနိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်ပရိသတ်များအနေနဲ့ မိမိမှာရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာဂျာနယ်တွေကို မျှဝေချင်ပါက အပေါ်မှာရှိတဲ့ Add your documents to this collection ဆိုတဲ့လင်ခ့်ကို နှိပ်ပြီး မိမိစာအုပ်များကို Scribd မှာမျှဝေနိုင်ပါတယ်။
Google Document Version for 2009 Computer
ကွန်ပြူတာဂျာနယ် – ၁လပိုင်း ၂၀၀၉
ကွန်ပြူတာဂျာနယ် – ၂လပိုင်း ၂၀၀၉
ကွန်ပြူတာဂျာနယ် – ၃လပိုင်း ၂၀၀၉
ကွန်ပြူတာဂျာနယ် – ၄လပိုင်း ၂၀၀၉
ကွန်ပြူတာဂျာနယ် – ၅လပိုင်း ၂၀၀၉
ကွန်ပြူတာဂျာနယ် – ၆လပိုင်း ၂၀၀၉
ကွန်ပြူတာဂျာနယ် – ၇လပိုင်း ၂၀၀၉
ကွန်ပြူတာဂျာနယ် – ၈လပိုင်း ၂၀၀၉
ကွန်ပြူတာဂျာနယ် – ၉လပိုင်း ၂၀၀၉
ကွန်ပြူတာဂျာနယ် – ၁၀လပိုင်း ၂၀၀၉
ကွန်ပြူတာဂျာနယ် – ၁၁လပိုင်း ၂၀၀၉
ကွန်ပြူတာဂျာနယ် – ၁၂လပိုင်း ၂၀၀၉
credit to : ကိုဂျပ်စတစ်
အခြား နည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်သောစာအုပ်များ စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြီး အသိပညာအတတ်ပညာတွေတိုးပွားပါစေ။
8 Responses to “ကွန်ပြူတာ ဂျာနယ်များ”
shwemyanmar says:	May 27, 2010 at 4:28 am	ခုလို စုစည်းဖော်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ဖြန့်ဝေနိုင်ပါစေ။
Reply	ဇာဇာစိုး says:	July 4, 2010 at 11:55 pm	ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။
Reply	laptop world says:	October 24, 2010 at 7:17 am	This is quite ridiculous but I actually do think that it might have some success. After all, they do have the right userbase for this new venture.
Reply	ကိုရဲမင်း says:	August 18, 2011 at 2:28 am	သိချင်တာတွေအရမ်းများ၊ သိဖို့ရာတွေအရမ်းများနေတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရည်းစားလောက်ကို မြတ်နိုးဖို့ကောင်းပါတယ်။
Reply	Blackspider says:	July 28, 2012 at 9:41 pm	I want to join your site.
Reply	early signs of pregnancy says:	March 31, 2013 at 11:01 am	Magnificent points altogether, you just receivedaemblem new reader. What would you suggest in regards to your post that you just madeafew days in the past? Any sure?
Reply	integrity payday loans says:	March 31, 2013 at 2:31 pm	Іt iѕ fantastiс as your other aгticles :
my wеb pagе: integrity payday loans
Reply	ုkyaw says:	April 3, 2013 at 2:34 pm	၂၀၁၂ စာအုပ်ကလေးတွေများ ရနိုင်မလားခင်ဗျာ
Recent Commentskyaw zin oo on မင်းသိင်္ခစာအုပ်များLin Lin on သတိုးတေဇ စာအုပ်များrate us online on ကျော်ထူး စာအုပ်များhoody on ကျော်ထူး စာအုပ်များsportingbet on ကျော်ထူး စာအုပ်များShout box မြန်မာစာမြန်မာစကား သတင်းစာ